Mpamatsy milina poleta boribory mora vidy mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Inona no milina poloney boribory biolojika?
Ny zezika voajanahary voajanahary sy ny zezika zezika mitambatra dia manana endrika sy habe. Mba hahatonga ny granules zezika ho tsara tarehy, ny orinasanay dia nanamboatra milina fandotoana zezika organika, milina fandefasana zezika mitambatra sns.
Ny milina fandefasana zezika biolojika dia fitaovana fanosotra boribory miorina amin'ny zezika organika sy granulator zezika mitambatra. Izy io dia mahatonga ny vongan-tsindrona mihodina ho baolina, ary tsy manana fitaovana miverina, tahan'ny famolavolana baolina avo, tanjaka tsara, endrika tsara tarehy ary azo ampiharina mafy. Izy io dia fitaovana mety indrindra amin'ny zezika biolojika (biolojia) hanamboarana sombin-javatra boribory.
Fampiharana milina poloney boribory biolojika
1.Ny zezika biolojika biolojika izay manao peat, lignite, fotaka zezika biolojika, mololo toy ny akora
2. Zezika granulika voajanahary izay mahatonga ny zezika ho toy ny akora
3. Zezika vita amin'ny mofomamy izay mahatonga ny mofom-boanjo ho lasa akora
4.Fanina mifangaro izay mahatonga ny katsaka, tsaramaso, sakafo ahitra ho lasa akora
5.Bio-feed izay mahatonga ny mololo ho toy ny akora
Tombony amin'ny milina poloney boribory biolojika
1. Output avo. Izy io dia mety ho mora miasa miaraka amin'ny granulator iray na maromaro amin'ny fotoana iray ao anatin'ny dingana, hamaha ny fatiantoka tokony hananan'ny granulator milina fanosotra.
2. Ny masinina dia vita amin'ny varingarina poloney roa na maromaro milamina, ny fitaovana dia hivoaka aorian'ny famolahana imbetsaka, ny vokatra vita dia manana habe mitovy, hakitroka tsy tapaka ary endrika tsara, ary ny tahan'ny mamolavola dia hatramin'ny 95%.
3. Izy io dia manana firafitra tsotra, azo antoka ary azo itokisana.
4. Fandidiana sy fikojakojana mora.
5. Fifanarahana matanjaka, afaka miasa amin'ny tontolo isan-karazany izy io.
6. fanjifana herinaratra ambany, vidin'ny famokarana ambany ary tombony ara-toekarena avo.
Fampisehoana horonantsary volo voajanahary voajanahary
Safidy maodely boribory biolojika voafantina
Diameter Disc (mm)
Haben'ny endrika (mm)
Teo aloha: Masinina fonosana avo roa heny Hopper
Manaraka: Masinina fametahana zezika miorina